Tianjin Forman Ngwá ụlọ bụ ụlọ ọrụ na-eduga n'etiti ebe ugwu China nke guzobere na 1988 na-enyekarị oche iri nri na tebụl. Forman nwere nnukwu ndi otu ahia nwere ihe kariri 10 ndi okacha amara ahia, na ijiko uzo ahia na ntaneti, ma na egosiputa ikike mbu na ihe ngosi obula, otutu ndi ahia na-ele Forman anya dika onye na-adigide. Ikesa ahia bu 40% na Europe, 30% na USA, 15% na South America, 10% na Asia, 5% na mba ndi ozo. FORMAN nwere ihe karịrị 30000 square mita, nwere usoro ntinye nke 16 na igwe mgbanaka 20, akụrụngwa kachasị dị ka mgbatị na robot na-akpụzi robot etinyegoro na usoro mmepụta.
nke meziwanyewanye izi ezi nke ebu na nrụpụta ọrụ. Ndị Tozuru Okè management usoro na àgwà na-elekọta dị ka nke ọma dị ka elu ọkà ọrụ hụ irè ngwaahịa nke elu agafe ọnụego. Nnukwu ụlọ nkwakọba ihe nwere ike ịnwe ihe karịrị 9000 square mita ebuka na-akwado ụlọ ọrụ mmepụta ihe nwere ike na-agba ọsọ na oge kachasị elu n'enweghị nsogbu ọ bụla. Nnukwu ihe ngosi ga-emeghe maka gị mgbe niile, na-eche ọbịbịa gị!
N'ịbụ ndị kasị ngwọta nke anyị factory, anyị ngwọta usoro a nwalere ma merie anyị ahụmahụ ikike asambodo. Maka usoro ndị ọzọ na nkọwapụta ihe ndepụta, biko pịa bọtịnụ ka ị nweta nformation ndị ọzọ.